Ndị mmekọ Amazon na Fiat na-ere ụgbọ ala | Akụkọ akụrụngwa
Amazon nọ na-eme ihe niile enwere ike ruo ọtụtụ afọ iji hụ na ọ dịghị anyị mkpa ịhapụ ụlọ iji zụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Amazon enyela anyị ohere ịzụrụ site na weebụsaịtị ya iji jupụta ngwa nju oyi anyị. Mana ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ahụ na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ, ebe ụlọ ọrụ Jeff Bezos nwere nkwekọrịta na ndị otu Fiat ịmalite ire ụfọdụ ụdị ya site na weebụsaịtị Amazon. N'ụzọ ezi uche dị na ya, iji mezue usoro ndị ahụ, anyị ga-aga n'ụlọ ahịa ndị nrụpụta Italiantali.
Na mbu, Amazon amaala nkwekọrịta na Seat na France, mana usoro a nwere naanị site na ịkpọtụrụ ekwentị dị mfe. Amazon ga-ekwe ka ndị ọrụ niile nwere mmasị ịzụrụ ụdị Fiat Otu n'ime ha bụ 500, 500L na Panda na-azụta ụdị ndị a na mbelata 33%, ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa ndị na-ere ahịa. Ozugbo i mere ndoputa nke ugbo ala, ị ga-eleta ndị Fiat itieutom iji mee ka ihe zuo formalize na ịkwụ ụgwọ. Asọ ga-adị njikere ịnapụta izu abụọ mgbe ntinye akwụkwọ.
Ntugharị a nke Fiat na Amazon bụ nkwaghari ga-emetụta asọmpi na mgbakwunye na ịnwale kpalie ire ahịa nke ụdị gị, ndị ahịa ya na-adalata nkeji iri na ise. Usoro a agaghị abụ ihe ọchị nye ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa bụ ndị ga-anọgide na-abụ ebe etiti iji nwalee ụgbọala ndị ọrụ ahụ tupu ha ahọrọ ịkekọrịta site na Amazon, ma ọ bụrụ na ego ndị ahụ nwere ike rue 33% dị ka ekwuputara na nkwekọrịta ahụ ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndị mmekọ Amazon na Fiat iji ree ụgbọ ala
Mekọrịta ozi SMS niile n'ofe ngwaọrụ gị niile na Pulse